Buugga Katidralka badda: yaa qoray, muxuu ku saabsan yahay, jilayaal | Suugaanta hadda jirta
Buugga Katidralka ee Buugga Badda
Buugga The Cathedral of the Sea Waxay ahayd tii ugu horreysay ee qoraaga, Ildefonso Falcones, uu kaga dhex barto adduunka suugaanta, isagoo ahaa guul qaran iyo caalami ahaanba. Xaqiiqada ah inay isku dartay daacadnimo iyo aargoosi, jacayl iyo khiyaano, iyo waliba waxyaabo kale oo midba midka kale kansal galiyay ayaa ka dhigay mid muuqda
Laakiin maxaa ku saabsan? Ma u fiican tahay sida ay yiraahdaan? Mudan? Haddii aad la yaaban tahay oo aanad wali arkin la qabsiga ama akhrinta buugga, waxa aan kuu sheegayno ayaa kaa caawin kara inaad ka takhalusto shakiga.
1 Waa kuma qoraaga buugga The Cathedral of the Sea
2 Muxuu ka hadlayaa buugga Katidral-ka badda
3 Jilayaasha ugu waaweyn
4 Tixda taxanaha ah ee buugga waafajinaya
Waa kuma qoraaga buugga The Cathedral of the Sea
Sidii aan horay u soo sheegnayba Qoraaga buugga La Catedral del Mar cid kale ma aha Ildefonso Falcones. Xaqiiqdii, magaciisa oo buuxa waa Ildefonso María Falcones de Sierra. Waa qareen, laakiin sidoo kale qoraa Isbaanish ah.
Riwaayaddiisii ​​ugu horreysay wuxuu ahaa The Cathedral of the Sea, sanadkii 2006, laakiin runtu waxay tahay markasta oo uu buug soo qaato waxay noqoneysaa guul suugaaneed.
Falcones waa wiilka qareenka iyo haweeneyda guriga joogta. Isaga oo 17 jir ah ayuu aabihiis waayey, taasna waxay muujisay inuu ku khasbanaaday inuu ka tanaasulo xirfadiisa ciyaareed, maadaama uu ahaa nin fuushan (sidoo kale horyaal yar oo Isbaanish ah oo ku boodaya) Tallaabada xigta ee uu qaaday waxay ahayd inuu bilaabo inuu wax ka barto Jaamacadda, wuxuuna u sameeyay si weyn: barashada laba darajo: dhinaca kale, Sharciga; dhinaca kale, Dhaqaale. Si kastaba ha noqotee, wuxuu si dhakhso leh u ogaaday in xirfaddiisu ay la socoto Sharciga oo uu diiradda saaray shaqadan intii uu ka shaqeynayay hoolka bingo.
Qalin jabiyay qareennimo, inuu yahay qoraa kama hor istaageyso inuu sii wato shaqadiisa qareennimo ee shirkadiisa qareen ee Barcelona. Xaqiiqdii, iskuday inaad wada dhigto. Xaqiiqduna waxay tahay in riwaayaddii ugu horreysay ee uu sii daayay ay qaadatay illaa shan sano si ay u siiso dhibcaha ugu dambeeya. Si kastaba ha noqotee, 2019 waxay noqotay mid la ogaaday, markii la bilaabay sheekadiisa cusub, Soul Painter, in qoraagu uu leeyahay kansarka mindhicirka, oo leh saddex metastases.
Taasi, oo ay weheliso luminta sharaftii isaga la siiyay ee lagu eedeeyay Hanti-dhowrka buugaagtiisa, ayaa sababay guushiisa inay dhacdo.
Muxuu ka hadlayaa buugga Katidral-ka badda
Buugga "The Cathedral of the Sea" waxaa la dhigay qarnigii XNUMX-aad ee Barcelona bartiisa dhexena waa dhismaha kaniisadda Santa María del Mar. Si kastaba ha noqotee, sida buug kale oo caan ah, sida Tiirarka Dunida, waa run in xiriiriyahan uu yahay uun macnaha guud ee looga hadlayo xidhiidhada jilayaasha ka qayb qaata, si toos ah ama si dadban, ugu jira.
Buugga wuxuu diiradda saarayaa dadka deggan degmo kalluumeysi oo ku taal Ribera de Barcelona kuwaas oo isku dayaya inay ku noolaadaan lacagta iyo dadaalka shaqadooda. Halkaas ayay ku gaadhaan go’aanka ay ku dhisayaan macbudka Marian, oo ah kan ugu weyn ee ilaa hadda la ogaa, kaas oo ay ugu yeedhaan Santa María del Mar.
Intii ay wadeen hawshan, jilaaga sheekada, Arnau Estanyol, ayaa isbedelaya, koraya oo arkaaya sida ay Barcelona isu bedesho. Isaga iyo aabihiis, Bernat, waa nin uu halakeeyay sayid dagaal oo wax walba ka qaatay.
Riwaayadda waxaad ku arki kartaa sida ay uga soo baxayaan baxsadka una noqonayaan kuwa gobta ah, laakiin sidoo kale sida cadowga doonaya inay u arkaan isaga lagu dilo gacmaha Inquisition ay u koraan.
Jilayaasha ugu waaweyn
Cathedral of the Sea waxay leedahay jilayaal badan oo, daqiiqado gaar ah oo sheeko-xariir ah, noqda geesiyaal. Si kastaba ha noqotee, in la xuso dhammaantood waxay noqonaysaa wax aan macquul ahayn, sidaa darteed waxaan kuu daynaynaa kuwa aan tixgelinno ugu muhiimsan ee novel ah.
Arnau Estanyol: Waa halyeeyada aan muran ku jirin ee buugga. Wuxuu ku koray muwaadin madax banaan oo ka tirsan Barcelona laakiin taasi micnaheedu maahan inuusan u baahneyn inuu la dagaallamo cadaalad darrada uu arkayo.
Bernat Estanyol: Isagu waa Arnau aabihiis.
Joan Estanyol: Waa Arnay walaalkiis, Bernat oo ah wiil uu korsaday.
Aabe Albert: Wadaadka kaniisada Katidral. Waa midda siisa Arnau aragti hoose oo xaqdarro ah oo ka dhacda hareeraheeda isla markaana u dhaqanta, si uun, codka damiirkiisa.
Francesca Esteve: Arnau hooyadeed. Waxay ku egtahay kufsi taasna waxay ka dhigeysaa inay noqoto dhillo.
Aledis: Waa jacaylka weyn ee halyeeyada. Si kastaba ha noqotee, markay kala tagayaan in muddo ah, markii Arnau soo noqday wuxuu ogaadaa inuu dhillo ku noqday amarka hooyadiis.
María: Iyadu waa afadii ugu horreysay ee Arnau.
Sahat: Dabeecadani aad ayey muhiim ugu tahay Arnau maxaa yeelay isagu waa midka indhaha u fura indha barwaaqada. Dabcan, waa addoon.
Elionor: Arnau xaaskiisa labaad iyo waaxda Boqorka.
Tixda taxanaha ah ee buugga waafajinaya
Waa inaad ogaataa in, 2018, gaar ahaan Maajo 23, Antena 3 ay bilawday inay baahiso waqtiga ugu horeeya (laga bilaabo 22ka fiidnimo ilaa saqda dhexe) la qabsashada buugga La Catedral del Mar.
Tani Waxay ka kooban tahay oo keliya 8 qaybood oo qiyaastii ah 50 daqiiqo oo dherer ah Runtuna waxay tahay inay ahayd guul, maxaa yeelay cutubka koowaad kaligiis wuxuu lahaa ilaa afar milyan oo daawadayaal ah.
Hadda, sida had iyo jeer dhacda, waxaa jira faraqyo badan oo u dhexeeya taxanaha Antena 3 iyo buugga. Tusaale ahaan, in Puigyada ku jira buugga sheeko-yaraha ay dhaleen 4 carruur ah, halka taxanahan ay seddex kaliya lahaayeen. Intaas waxaa sii dheer, muuqaalka ay Margarida ku markhaati kacayso jeedalkii addoonta Habiba kuma qorna buugga sidoo kale.
Waxaa jira muuqaallo kale oo aan midkoodna dhicin, laakiin ay ku bixin jireen riwaayad dheeri ah ama sii adkeyn lahaayeen xiriirka ka dhexeeya jilayaasha. Xaqiiqdii, waxaa jira qaar weli nool markay ku dhintaan sheekada iyo kuwa kale oo leh dhammaad aad uga duwan waxa Ildefonso Falcones sheegayo.
Marka, hadda oo aad ogtahay waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa buugga The Cathedral of the sea, waxaa la joogaa waqtigii adiga aad qaadan lahayd go’aanka inaad aqriso iyo in kale. Dabcan, waa inaad ogaataa inuu jiro qayb labaad, Dhaxalsugaha dhulka, oo la daabacay sanadka 2016. Ma ogin in qaybta saddexaad ay dhowaan imanayso, laakiin waa buugaag aad ka akhrisan karto dhib la'aan maxaa yeelay iyagu waxay leeyihiin bilowga iyo dhammaadkooda. Ma aqrisay? Sideed u aragtaa arrintaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Buugga Katidralka ee Buugga Badda
Qabuuraha buugaagta la iloobay